USENGUNDI-NGASITHE-BENI owesilisa wase-Manyiseni, eNgwavuma, owanikwa umyalelo wokuqoqa yonke imithwalo yakhe afulathele izwe lakwaMathenjwa emuva ko-kufakelwa incwadi yesivimbelo senkantolo yibambabukhosi eli-msola ngokulihlukumeza.
UMnu Mdabe Mathenjwa (34), wayalelwa yiNkantolo yeMantshi yaseNgwavuma ukuba angaphi-nde abonakale kule ndawo ngoba ibamba likhala ngokuthi ulehlisa isithunzi, futhi waphinde wadunga umhlangano owawumhla ka-18 kuNhlangulana (June) woku-dingida udaba lokubuyiselwa esi-khundleni kwenduna eyayisolwa ngokuthuka amalungu omndeni wasebukhosini nalo ibamba uqo-bo.
ILANGA lizibonile izithombe mnyakazo (videos) lapho uMdabe exina ngemibuzo ibamba ethi kwenziwa yini libenemihlangano ethinta indlunkulu yakwaMathe-njwa kodwa amalungu ayo enge-kho.
Uphinde ezwakale elitshela ukuthi seliphelelwe yisikhathi so-kubamba lesi sihlalo ngoba umnikazi waso, uMnu Khulasibone Mathenjwa – ozalwa yinkosi Mbekwane owashona ngo-2003 – usekulungele ukuhlala kusona.
Ibamba laphakanyiselwa kulesi sihlalo ngo-2016 ngesikhathi isizwe sakwaMathenjwa sisagutshuzelwe yizinkinga zombango wesihlalo.
Ekhuluma neLANGA uMdabe, uthe wazama ukusedlulisa isinqumo senkantolo kodwa kwanga-lunga.
“Mina ngiya-ye ngikhulume ngento engino-bufakazi bayo. Ubaba uNdumo waphakanyiselwa esi-bayeni (esigo-dlweni) ekuHlehleni ne-ndodana ye-nkosi uKhulasibone ngo-2016, satshelwa ukuthi uzobamba iminyaka emibili.
“Ngesikhathi ngimphonsa imibuzo, ngangifuna ukwazi ukuthi kungani ehamba ngemuva aba-ntwana basendlunkulu eseyohlangana nomuntu owethuka indlu-nkulu.
“Inkantolo yachema naye ngaxoshwake endaweni, kwathiwa ngingaphinde ngilubeke olwami unyawo, kungenjalo ngizothathelwa izinyathelo zomthetho. Noma ngabe kushoniwe emndenini wami, kangiyi. Nginezingane osekuphele izinyanga ngingakwazi ukuzibona,” kusho uMdabe.
Previous articleNgeke aqashwe umqeqeshi omusha kwiBucs